ASEAN Think Tanks Network Virtual Summit | OnDoctor
လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ASEAN Think Tanks Network “ATTN” မှ ဦးစီးပြီး Virtual Summit တစ်ခုကျင်းပသွားရန် ရှိပါသည်။
အာရှဒေသအတွင်းမှ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းစုများ၏ CEO ၊ Founder၊ Professor၊ President၊ Chairperson စသည့်ရာထူးများကို တာဝန်ယူထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်း (၁၆) ဦးတို့မှ “Forging ahead together” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဆွေးနွေးသွားကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနှင့် Hub Myanmar နှင့် OnDoctor Application ၏ Founder and CEO ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာထက်ဇံလင်းမှ “Digital Health & Practice in Myanmar” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အရွေ့အပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ မည်သို့ပြောင်းလဲလာသည်ဆိုခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု Application များအသုံးပြုပုံတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်မှ တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
The ASEAN Think Tanks Network “ATTN” is mainly composed of government officials, C-Level positions, High Net Worth Individuals, Entrepreneurs, Academics, Ivy League Alumni & Young leaders who share the vision of ASEAN 2025.
“ Forging ahead together “Topics discussed in line with the Globalization and Industrialization 4.0.
EMPOWERING ASEAN 4.0
First ASEAN Think Tanks Network Virtual conference under the Theme “ Empowering ASEAN 4.0 “